Nin Hollandees ah oo 69 jir ah ayaa dacwad geeyey Maxkamad si loo yareeyo da’diisa… – Hagaag.com
Nin Hollandees ah oo 69 jir ah ayaa dacwad geeyey Maxkamad si loo yareeyo da’diisa…
Posted on 8 Nofeembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Nin Holland u dhashay oo da’da howlgab ah ayaa maxkamada ka Furay dacwad asaga oo doonaya inuu da’diisa bedelo si uu fursad ugu helo shukaansiga dumarka.
Emile Ratelband oo da’diisu tahay 69 sano ayaa doonayo, in la beddelo taariikhda dhalashadiisa ee March 11, 1949, laga dhigo March 11, 1969, asaga oo u ekeysiinaya isbedelka aqoonsiga dadka jinsigooda bedela.
Ratelband ayaa u sheegay wargeyska “De Telegraaf” ee Holland ka soo baxa “Waad beddeli kartaa magacaaga iyo jinsigaaga sida nin naag loo bedelay ama dhinaca kale, Hadaba maxaa loo ogolaan waayey inaad bedesho da’daada?.
Waxaa la filayaa in Maxkamadda maxaliga ah ee magaalada Arnhem, koonfur bari ee Amsterdam, ay go’aamiso kiiska afar toddobaad gudahood.
Hase yeeshee, saraakiishu waxay ka gaabsadeen fursada kiiska, sababtoo ah iyada oo aan jirin qaab sharci ah oo qofka u oggolaanaya inuu beddelo taariikhdiisa dhalashada.
Waxa uu sheegay in uu dareensan yahay in la takooray sababta da’diisa, taasi ayaa waxay saameyn ku yeelatay fursadaha helitaanka shaqo cusub iyo yaraanta ku guuleysiga shukaansiga haweenka.
Wuxuu ku daray “Markaan ahay sagaal iyo lixdan sano jir, waxaa kooban fursadaheyga, laakin haddii aad taha 49 jir , waxaan iibsan karaa guri cusub, waxaan kaxeyn karaa gawaari kala duwan, sidooo kale waxaa horteyda yaalla fursado badan oo shaqo”.
“Markii aan isticmaalo App-ka Tiender oo aan iraahdo da’deydu waa 69 jir, ma helayo wax jawaab ah, laakin haddii aan ahay 49 jir, oo qaabka wajigeyga ku siin karo aragti ah in aan ahay qof da’ yar, halkaasi waxaan ka helaya boos fiican”.
Ratelband ayaa sheegay in dhakhaatiirtu ay u sheegeen inuu caafimaadkiisu uu la mid yahay 45 jir oo naftiisa ku tilmaamay “ilaah dhalinyaro ah”.
Ratelband waxa uu sheegay in uu ka hari doono qaadashada lacagta hawlgabka haddii la bedelo taariikhdiisa dhalashada.
Dastuurka Nederland ayaa wuxuu mamnuucayaa in qofka da’diisa lagu takooro.